Guoomiyaha gobolka Mudugoo ku baaqay in laga qeyb qaato dhismaha wadada Wadaagsin – Radio Muqdisho
Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac(Tigay) ayaa ugu shacabka gobolka Mudug ku dhaqan ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan dib u dhis wadooyinka mara gobolka, isagoo intaa ku daray in qof kasta intii ay kari karto ku darsato dhismaha wadada Wadaagsin oo ku dhexeysa Gaalkacyo iyo xeebta Garacad.
Maxamed Yuusuf Jaamac ayaa sheegay in shirkado dhowr ah ay bixiyeen taageerada dhismaha wadadan isla markaana loo baahan yahay in shirkadaha kale ay sidaas oo kale sameeyeen.
“Waxaan ku talagalnay in aan isku tashano Xoolaha xerada noogu jira, iyadoo halku dhegayagu yahay Wan bixi aan wadada dhisnee Dahabka iyo Shidaalka isaga ayaa inooga qaalisan waayo isaga ayaanu leenahay” ayuu yiri gudoomiye Tigay.
Hadalkan ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa imaanaya iyadoo maamulka gobolka iyo ganacsatada deegaanada gobolka Mudug ay dhiso ku bilaabeen wadada Wadaagsin.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo xariga ka jaray mashruuca Leyrarka ileyska Cadceeda"SAWIRRO"